Antananarivo sy Toamasina Raikitra ny andrana fanafody tsindrona
Nanomboka omaly tany Toamasina sy eto Antananarivo ny andrana voalohany na “essai Clinique” na andrana ara-pitsaboana miendrika tsindrona, raha ny nambaran’ny Filohampirenena Andry Rajoelina tany Toamasina.
Niara-niasa tamina mpikaroka any Etazonia, aty amin’ny ranomasina Indianina ny fanjakana raha ny nambarany. Misy mantsy fitiliana goavana any Etazonia mampiasa ny Artemisia avadika tsindrona, ary izay fomba fitsaboana na “protocole” izay no ambara fa ampiharina aty amintsika. Efa noresahina tamin’ny OMS, ary eo an-dalana isika izao amin’ny “Essai Clinique” faobe aty Afrika. Efa nahazo alalana tamin’ny Komity siantifika eto Madagasikara kosa ny fanaovana an’io ho an’ny eto an-toerana, hoy I Andry Rajoelina. Ny alatsinainy teo ny Minisitry ny serasera, dia naneho fa manan-tsafidy ny marary na hotsaboina amin’ny CVO, ka heverina fa izay manaiky no hanaovana an’io andrana tsindrona io. 50 000 ny CVO nentina tany Toamasina omaly. Ankoatra izay, dia tsy hisy fahazoan-dàlana mivoaka sy miditra azo ekena, fa ireo fiara mitondra entana ihany no afaka mivoaka an’I Toamasina. Hapetraka ny laboratoara hanafainganana ny fakana singa sy fanaovana fitiliana. Ao anatin’ny 48 ora, dia tokony ho azo ny valiny ho an’ireo “symptômatiques” na misy soritr’aretina, hoy i Andry Rajoelina. Ampiana ny fitaovana ary avondrona ny ezaka handresena ny covid-19. Nisaotra manokana ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy 29 mianadahy avy any Antananarivo nanolo-tena hanampy sy hifanome Tanana amin'ny fitsaboana any an-toerana. Hisy ny hanara-maso ireo sy hitady ireo olona mety namindran’ireo voa na ny “tracing contact”. Natolotra omaly ny fiara 20, ary afaka andro vitsy dia ho tonga ny “chambre de désinfection” hiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana.